Induction Hardening Machine-fitaovam-pifanarahana
Home / Induction Hardening Machine / Masinina manamafy induction
Sokajy: Induction Hardening Machine Tags: induction hardening, fangatahana fanamafisana amin'ny induction, fitaovana fanamafisana orina, induction hardening machine, dingan'ny fanamafisana, ny fihanaky ny vovoka, rafitra fanamafisana, fanamafisana ny induksi-tany
Induction Heating Generator. (Herinaratra)
spray fluid System
DW-MF-15 Induction Generator 15KW 23A 1KHz-20KHz Araka ny fangatahana 3phases
DW-MF-45 Inducting Heating Rod Furnace 45KW 68A 1KHz-20KHz 3phases
Lafaoro fanalefahana induction DW-MF-15 15KW 23A 1K-20KHz 3phases
DW-MF-110 fitaovam-pandrefesana fampidiran-drivotra 110KW 170A 1K-8KHz 3phases
Manamafy ny fitaovana sy fitaovana isan-karazany, toy ny plier, ny sifotra, ny hammera, ny famaky, ny fametahana fitaovana ary ny tantsaha (fitambaran-katsaka).
Ny fanamafisana ny fiaramanidina samihafa sy ny môtô, toy ny boban-dava, ny fametahana, ny piston pin, ny kodiarana kodiarana, ny kodiarana alim-bary, ny valizy, ny vatany, ny antsantsa fiara, ny arofanina kely ary ny gorodona.
Fanamafisana amin'ny fitaovana elektrika isan-karazany, toy ny familiana sy famaky.
Fanamafisana ny fitaovam-pitaovana, toy ny latte deck ary mpitari-dalana.
Hardening for parts of metal parts and parts.
Shaft fanamafisana ny etona amin'ny zana-tsipìka